ချစ်မှုရေးရာ Archives - 9style
December 14, 2018 TjrxgWfzULaCgCdvDEချစ်မှုရေးရာ / အတွေးအမြင်No Comment on စိတ်ထားကောင်းတဲ့ မိန်းကလေး ဖတ်ဖို့
စိတ်ထားကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေက အချစ်ကံခေကြတာ များပါတယ်။သင်က စိတ်ထားကောင်းတော့ သင်ချစ်ခဲ့သူတွေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကကျတော့ သင့်အပေါ် ဘာလို့ မကောင်းရတာလဲ။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ ဆိုးတဲ့ယောက်ျားတွေချည်းပဲ ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ ဝေဒနာတွေ လျော့ပါးသက်သာစေဖို့…
December 13, 2018 TjrxgWfzULaCgCdvDEKNOWLEDGE / ချစ်မှုရေးရာNo Comment on ဒီလိုဆိုရင်တော့ သင်က အချစ်ရေးမှာ ကံဆိုးတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်နေပါပြီ
အချစ်ဆုိုတာ တကယ်ကုိုကြည်နူးစရာခံစားချက်လေးပါ။ သင်ဟာစစ်မှန်တဲ့ Relationship တစ်ခုကုိုပုိုင်ဆုိုင်ထားသူဆုိုရင် ဒီလုိုခံစားချက်လေးရဖုို့ မျှော်လင့်နေစရာမလုိုပါဘူး။ အကယ်လုို့ တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့တွဲနေပြီး ပျော်ရွှင်မှုမရှိဘူးဆိုရင် သူကသင့်အပေါ်မှာ အချစ်စစ်နဲ့ချစ်တာ ဟုတ်ပါ့မလားဆုိုတာ သိနိုင်ဖို့ ခုပြောပြမယ့်အချက်လေးတွေကုိုဖတ်ကြည့်ပါဦး။….. ၁။ ဦးစားပေးမှု။ သင်က သူ့ရဲ့ ပထမဦးစားပေးမှုမှာမရှိတာမျိုးပါ။…
December 12, 2018 TjrxgWfzULaCgCdvDEချစ်မှုရေးရာNo Comment on ကာမ လိမ်လည်မှု ဆိုတာဘာလဲ ရည်းစားထားရတာ အန္တရာယ်ရှိနေပါသလား..
ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ လိမ်လည်ပြီးကာမရယူမှုနဲ့ တရားစွဲဆိုလို့ရသလဲ လိမ်လည်ပြီး ကာမရယူမှုနဲ့ တရားစွဲတာတွေ ခပ်စိပ်စိပ်ကြားလာနေရတယ်။ အဲသလိုကြားလာရတာနဲ့အမျှ ဂိုဏ်းနှစ်ဂိုဏ်းသိသိသာသာ ကွဲလာတယ်။ ဒီပုဒ်မနဲ့တရားစွဲတာကိုထောက်ခံသူဂိုဏ်းနဲ့ ကန့်ကွက်သူဂိုဏ်း။ “မိန်းကလေးတယောက်ကို ယူပါမယ်ပြောပြီးအတူအိပ်၊ ပြီးတော့ မယူဘဲထားခဲ့တာ တရားသလား။””ဖိုနဲ့မ သဘောတူအိပ်တုန်းကအိပ်ပြီး နောင်မှ တရားစွဲတာ…
December 11, 2018 TjrxgWfzULaCgCdvDEချစ်မှုရေးရာ / အထွေထွေဗဟုသုတNo Comment on ပညာရှိခင်ပွန်းကို ဇနီးက လွှမ်းမိုးတယ် ပညာမဲ့ခင်ပွန်းက ဇနီးကို လွှမ်းမိုးတယ် ဆိုတဲ့ စာလေးတွေ့မိလို့ပါ
ပညာရှိခင်ပွန်းကို ဇနီးက လွှမ်းမိုးတယ် ပညာမဲ့ခင်ပွန်းက ဇနီးကို လွှမ်းမိုးတယ် ဆိုတဲ့ စာလေးတွေ့မိလို့ပါ…. သူ့အဓိပ္ပါယ်ကိုတိုက်ရိုက်တွေးရင် တစ်မျိုးကြီးပါ…ယောက်ျားနိုင်တဲ့ မိန်းမ… မိန်းမနိုင်တဲ့ယောက်ျား ဆိုတာမျိုးပေါ့…… စာရဲ့အဓိပ္ပါယ်အမှန်က အဲ့ထက်လေးနက်ပါတယ်… လေးလေးနက်နက်တွေးရင် အကြင်လင်မယားဆိုတာ တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက်နိုင်ဖို့မှမဟုတ်ဘဲ…… ကျွန်မရဲ့ဖေဖေနဲ့မေမေဆိုရင် အများအမြင်မှာ…
December 10, 2018 TjrxgWfzULaCgCdvDEချစ်မှုရေးရာ / အတွေးအမြင်No Comment on ရင်နင့်နေအောင်ခံစားရသော အဖြစ်အပျက်လေး
တစ်နေ့မှာကျနော်လမ်းလျှောက်နေတုန်းဖုန်းသံမြည်လာပါတယ်ဖုန်းကောက်ကိုင်လိုက်တော့ဖုန်းသံထဲကကြားရတဲ့အသံက နုနယ်တဲ့ မိန်းကလေးလေးရဲ့အသံလေးပ“ဖေဖေ မြန်မြန် ပြန်လာတော့လေ… မီးမီး ဖေ့ဖေ့ကို အရမ်းသတိရနေတယ်…”အာရုံမှာ ချက်ချင်းသိလိုက်တယ်… ဒါဟာ ဖုန်းမှားနေတယ်ဆိုတာဒီခေတ်ဒီခါမှာ ဒါမျိုးဟာ မထူးဆန်းတော့ပါဘူးကျနော်လဲ စိတ်မရှည်စွာနဲ့ဘဲ ပြောလိုက်တယ်… “ဖုန်းမှားနေပြီ” ဆိုပြီး ဖုန်းကိုချလိုက်တယ် နောက်ရက်တွေမှာလဲ ဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့…
ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေအားလုံး မိမိ ဘယ်ခုနှစ်မှာ မွေးသလဲဆိုတာ အောက်မှာရှာကြည့်ရအောင်
December 8, 2018 December 8, 2018 TjrxgWfzULaCgCdvDEချစ်မှုရေးရာ / ဗေဒင်ရေးရာNo Comment on ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေအားလုံး မိမိ ဘယ်ခုနှစ်မှာ မွေးသလဲဆိုတာ အောက်မှာရှာကြည့်ရအောင်
💟အချစ်ရေး၊အိမ်ထောင်ရေးဗေဒင်နှင့်လက္ခဏာ မေးလိုသူများ #Ph-09440243656ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ မိမိ မွေးဖွားတဲ့ခုနှစ်ကပြောပြတဲ့အချစ်ရေးအကြောင်း 1975မှ 2008 အတွင်းမွေးဖွားသူတွေအတွက်သာ အချစ်ရေးဂြိုလ် ပုတိ 1976;1983;1990;1997;2004; အချစ်ရေးဂြိုလ် ဘင်္ဂ 1977;1984;1991;1998;2005; အချစ်ရေးဂြိုလ် အထွန်း 1978;1985;1992;1999;2006; အချစ်ရေးဂြိုလ် ရာဇ…
December 7, 2018 TjrxgWfzULaCgCdvDEချစ်မှုရေးရာNo Comment on မ်ိန်းမတွေကို အသည်းယားအောင် လုပ်နည်း ( ၁ဝ ) နည်
ယောက်ျားတစ်ယောက် အနေနဲ့ ဒီခေတ်ဒီ အခါမှာ ဆော်ကြွေအောင် နေနည်းတွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ ပြောနေကြတာက ငွေက အ ဓိကဆိုပေမယ့် တကယ်လို့ ငွေတစ်ခုတည်းကြည့်တက်တဲ့ မိန်းမ မျိုးဆိုရင်တော့ မကြည်ရင်နေပါစေ ဝေးဝေးသာရှောင်ပေတော့။ အောက်ပါ အချက် ၁၀…
မငိုပါနဲ့ ! မတန်လို့ပါ….
December 5, 2018 TjrxgWfzULaCgCdvDEချစ်မှုရေးရာNo Comment on မငိုပါနဲ့ ! မတန်လို့ပါ….
မင်းကသာ မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက် . . ဟိုမှာက အသစ်နဲ့သာယာနေတာ …!မတန်ဘူး…!! မင်းကသာ သူ့ကို လွမ်းနေတာ . .ဟိုမှာတော့ Kissing ဘယ်နှခါမှန်းမသိ ဆွဲပြီးနေလောက်ပြီ …!! 🙂 မင်းကသာ သူ့ Message…
နောက်အိမ်ထောင် နှင့်​ ​ဖောက်​ပြန်​ခြင်း အစ်​မကြီး တစ်​​ယောက်​ရဲ့ ​တောင်းဆိုချက်​ပါ တင်ပေး​လိုက်​ပါပြီ
December 5, 2018 TjrxgWfzULaCgCdvDEချစ်မှုရေးရာNo Comment on နောက်အိမ်ထောင် နှင့်​ ​ဖောက်​ပြန်​ခြင်း အစ်​မကြီး တစ်​​ယောက်​ရဲ့ ​တောင်းဆိုချက်​ပါ တင်ပေး​လိုက်​ပါပြီ
နောက်အိမ်ထောင် ပြု တဲ့ ဖခင် မိခင် တိုင်း လိုလို အများစု ဘဝဇာတ်သိမ်း မကောင်းကြပါဘူး။ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ အမေ့ အဖေ့ ကို အသနားပိုပြီး သားသမီးများက ပို ချစ်ကြတယ်။ အသိစိတ်က အဖေ…